Fanatsarana ny fiainan'ireo mararin'ny Medicare voan'ny aretin'ny voa izao
DaVita Integrated Kidney Care (DaVita IKC)—miaraka amin'ireo dokotera voa efa ho 1,000, mpanome transplantation, mpanome hospice ary mpitsabo efa mandroso—dia nanambara androany ny fandefasana fandaharanasa fitsaboana mifototra amin'ny sanda 11 manerana an'i Etazonia, izay antenaina hahatratra voa 25,000 eo ho eo. marary. Ny tanjon'ny fandaharan'asa dia ny hanampy amin'ny fampihenana ny fivoaran'ny aretin'ny voa mitaiza (CKD) sy ny fanampiana ireo marary marobe amin'ny tsy fahampian'ny voa hiditra amin'ny famindrana voa sy ny dialyse ao an-tranony.
Ireo fandaharan'asa ireo dia ampahany amin'ny maodely vaovaon'ny governemanta an-tsitrapo Fikarakarana voa (KCC) — fampisehoana fikarakarana mifototra amin'ny sanda izay nanomboka tamin'ny 1 Janoary 2022, ary haharitra dimy taona. DaVita IKC sy ireo mpiara-miombon'antoka aminy dia mandray anjara amin'ny safidy Comprehensive Kidney Care Contracting (CKCC) ao anatin'ny KCC.
Mitovy amin'ireo fihetsiketsehana ara-pahasalamana mifototra amin'ny sanda taloha nataon'ny governemanta, ny CKCC dia mamela ny foibe dialyse, ny nephrologists ary ny mpanome tolotra ara-pahasalamana hafa hanangana fikambanana mikarakara tompon'andraikitra mifantoka amin'ny voa mba hitantana ny fikarakarana ny marary Medicare. Ny mampiavaka ny fihetsiketsehana CKCC dia ny famporisihana ara-bola hitantana ny fitsaboana ireo mararin'ny Medicare amin'ny dingana faha-4 sy faha-5 amin'ny CKD, hanemorana ny fanombohan'ny dialyse sy hanentanana ny famindrana voa.
Ny CKD dia misy fiantraikany eo amin'ny 1 amin'ny 7 (37 tapitrisa) lehibe any Etazonia. Indrisy anefa fa tsy fantatry ny ankamaroan'ny olona voan'ny CKD fa mihena ny asan'ny voa. Amin'izao fotoana izao, eo amin'ny 50%-n'ny olona voan'ny tsy fahombiazan'ny voa no “midona” amin'ny dialyse — manomboka fitsaboana tsy misy fampitandremana amin'ny toe-javatra maika. Ny fianjerana dia tsy miteraka adin-tsaina ara-batana sy ara-pihetseham-po ho an'ny marary ihany fa amin'ny salanisa ihany koa dia mitentina $53,000 fanampiny isaky ny marary amin'ny taona voalohany nanaovana ny dialyse.
Ny fandaharan'asa fikarakarana hafa mitovitovy amin'izany dia niasa tsara indrindra tamin'ireo olona marary be filàna sy lafo vidy, toy ireo manana CKD sy aretin'ny voa (ESKD). Ny fandaharan'asa toy izany dia manome hery ny marary, ny mpitsabo ary ny ekipan'ny fikarakarana hanampy amin'ny fanemorana ny fivoaran'ny CKD amin'ny fitantanana tsara kokoa ny anton-javatra mety hampidi-doza toy ny diabeta sy ny fiakaran'ny tosidrà — ireo antony roa lehibe mahatonga ny ESKD.
Ho an'ireo marary ao amin'ny fandaharan'asa CKCC, DaVita IKC sy ireo mpiara-miombon'antoka aminy dia mifantoka amin'ny fandrindrana tsara kokoa ny filany fikarakarana voa sy tsy voa, ary koa ny fanatsarana ny fitsabahana mba hanampiana azy ireo ho salama sy ivelan'ny hopitaly. Raha ny marina, ny fampihenana ny fidirana amin'ny hopitaly dia tsy manome fotoana bebe kokoa ao an-trano ho an'ireo marary ireo hanao izay tiany, fa mety hampidina ny totalin'ny saram-pitsaboana ihany koa — mariky ny fandaharan'asa fitsaboana mahomby rehetra.
Satria ireo fandaharan'asa ireo dia hahatratra vahoaka marobe amin'ny marary Medicare any amin'ny jeografia an-tanàn-dehibe maro, ny DaVita IKC dia mahita fotoana hanohizana ny fanampiana amin'ny famokarana ara-pahasalamana lehibe kokoa amin'ny famindrana sy ny fikarakarana voa amin'ny ankapobeny.
Miaraka amin'ny fanombohana ny fandaharan'asany CKCC, DaVita IKC dia manantena ny hampitombo avo roa heny ny isan'ny marary mahazo fikarakarana voa mitambatra ao anatin'ny taom-piasana voalohany fotsiny. Ho fanampin'ny fandaharan'asa fitsaboana mifototra amin'ny sanda maro miaraka amin'ny drafitry ny fahasalamana manerana an'i Etazonia, izany dia manampy amin'ny fandrosoana ny tanjon'ny DaVita IKC amin'ny fanomezana ny tombotsoa amin'ny fikarakarana voa mitambatra ho an'ny marary rehetra.
Ny fandraisan'i DaVita anjara amin'ny fandaharan'asa fitsaboana mifototra amin'ny sanda dia manasongadina ny fanoloran-tenany amin'ny ankapobeny mba hampiray sy hanatsara amin'ny fomba mavitrika ny traikefa sy ny fikarakarana amin'ny dingana rehetra sy ny fametrahana ny diany amin'ny fikarakarana voa. Amin'izao fotoana izao, ny DaVita dia mitantana ireo marary manomboka amin'ny CKD ka hatramin'ny ESKD amin'ny alàlan'ny famindran-toerana, ary manao izany na manao dialyse ao an-trano, na any amin'ny hopitaly na any amin'ny iray amin'ireo tobim-pitsaboana any ivelany.
Previous Inona no mafana ankehitriny amin'ny akanjo maso amin'ny taona 2022
Manaraka Fitsaboana Matsilo vaovao ho an'ny migraine